बाग्लुङमा पहिरोले बिपत्ति ल्याएपछि पल शाह र दुर्गेश थापा सहयोग गर्न जाँदै – Kavreonline Patra
मुख्य पृष्ठ /News/बाग्लुङमा पहिरोले बिपत्ति ल्याएपछि पल शाह र दुर्गेश थापा सहयोग गर्न जाँदै
बाढी पहिरोले जन धनको क्षति भएपछि यतिबेला बाग्लुङ पिडामा परेको छ । जुन पीडामा मलम लगाउन अभिनेता पल शाह र गायक तथा मोडल दुर्गेश थापा सो ठाउमा जाने भएका छन् । दुर्गेशले आफ्नो अफिसियल फेसबुक एकाउन्टमा उक्त कुराको जानकारी गराएका हुन् ।
उनले त्यहाको अवस्थाको बारेमा पनि जानकारी गराएका छन् । बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका वडा नं ८ र ९ मा गएराती अर्थात १७ गते बुधबार भुजिखोलामा आएको बाढीले ठूलो धनजनको ठूलो क्षति पुगेको छ ।
बाढिका कारण वडा ८ र ९ को को बस्तिमा ठूलो क्षति पुग्यो । जस्का कारण थापाले लेखे अनुसार अहिले सम्म ४१ जना बेपत्ता छन भने १७ जनाले ज्यान गुमाईसकेका छन् । स ब फेला परेका हरुको सनाखत हुन भने बाकी रहेको छ । खबर अनुसार पहिरोका कारण २५ घर बगेका छन् ।
दु:खद घटना भएको छ सबै मिलिजुली सहयोग को अपिल मा जुटौ, सहयोगको लागि अपिल!!
बाग्लुङ पहिरो पीडितको लागि हामी जाने तयारीमा छौ। बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका वडा नं ८ र ९ मा गए राती भुजिखोलामा आएको बाढीले ठूलो धनजनको ठूलो क्षति पुगेको छ ।
४१ जना बेपत्ता, १७ जनाको शब फेला र सनाखत भने अझै हुन सकेको छैन। २५ घर बगेको छन। थप विवरण आउन बाकी ? यो दु:खद खबरले स्तब्ध बनाएको छ । मृत्यु भएका सम्पुर्णलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली ब्यक्त गर्दछु र घाइतेको शिघ्र स्वास्थलाभको कामना ।
काठमाडाैंमा काेराेना संकटकाे घण्टी, एकैदिन थपिए यति धेरै संक्रमित
भर्खरै काठमाडौंमा ठूलो भूकम्पको धक्का